Ny fironana ara-teknolojia: fitahirizana / MAM - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcaster ofisialy an'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » Featured » Trenan'ny teknolojia: fitahirizana / MAM
Trenan'ny teknolojia: fitahirizana / MAM
Namdev Lisman, filoha lefitra mpanatanteraka, Primestream
Ny fitahirizana no asa fitazonana ny zavatra mandra-ilainao azy indray, ary na dia toa tontolo tsy miova sy static aza izany, raha ny marina dia mifanohitra amin'izany izany. Ny indostria dia manohy hatrany fanavaozana ary ny mpamorona ny votoaty dia manohy ny fivoaran'izy ireo. Ny vokatra dia ny fitahirizana sy izay tadiavinao avy amin'izany dia kendrena mampihetsi-po. Nahita ny tsingerin'ny fanatsarana mihoa-pampana ho an'ny safidy fitehirizana mialoha isika miaraka amin'ny hafainganana ny hafainganana ny hafainganam-pandeha. Raha nitohy ny fandrosoana ny teknolojia dia nahita ny indostria nandia dingana vitsivitsy tany am-piandohana nanomboka tamin'ny alàlan'ny fanoratana, ary avy eo ny famindrana ny fananana ho an'ny haino aman-jery vaovao sy ireo rafitra rehefa nandroso ny teknolojia. Izahay izao dia mahita angon-dresaka nifindra tany amin'ny rahona izay nesorina tamin'ny mpanjifany ny takelaka ara-batana, miaraka amin'ny olana rehetra manodidina ny fitazonana azy sy hanavaozana azy. Nifindra avy amina boaty horonantsary na horonantsary izay teo ambanin'ny latabatry ny mpamokatra mankany amin'ny Object Storage izay mipetraka amin'ny toerana tsy misy afaka manondro ny indostria.
Na dia miha-lavitra aza ny vahaolana mifototra amin'ny rahona, ny fitrandrahana vaovao dia mamatotra an'io votoaty io amin'ny làlan-jotra miasa izay manantena ny fisian'ny 100%, fidirana eo noho eo, ny fikarohana ary ny fisintonana ary ny fahafahana miasa amin'ny fomba vaovao hamoronana renirano vaovao. Eto dia tsy ampy ho azy irery ny fampitam-baovao. Ny metadata manodidina ny haino aman-jery dia mila ho azo idirana, ary ny metadata dia mety ho zavatra avy amin'ny teny fikarohana, fampiasana, transkrip AI namorona angon-drakitra taloha ary ny fidirana amin'ireo proxies izay azo ampiasaina avy hatrany raha ny fampitam-baovao avo lenta dia mamindra any amin'ny tontolo famokarana.
Izany rehetra izany dia mitaky a Media Asset Management (MAM) vahaolana izay tsy vitan'ny hoe fantatrao izao ataonao izao, fa ny nataonao taloha. Raha ny marina dia mila manana anjara toerana lehibe i MAM amin'ny fisamborana, famokarana, fitantanana ary fampitana ny media. Ny MAM dia tsy maintsy nivoatra avy amin'ny fitaovana iray izay afaka mihazona fotsiny amin'ny fampahalalana mankany amin'ny olona iray izay mila mahatakatra ny toe-javatra ao ambadik'izany fampahalalana izany.
Androany, ho an'ny MAM hiasa tsara, tsy maintsy mahatakatra ny fahaiza-manao ao anaty fitahirizana an-tsokosoko. Ny valin'ny toerana ipetrahan'ny haino aman-jery dia mila porofo manohitra izay tadiavin'ny mpampiasa azy hanondrana làlana mamokatra izay manome ambaratonga vaovao. Ny MAM dia mila mamaha olana sy olana manerana ny mpanjifan'ny lasan'ny mpanjifa raha mbola mitazona ny fahitsiana hiasa amin'ny fomba vaovao amin'ny ho avy, na rehefa miova tampoka ny fepetra takiana. Ny fikarohana tsotra ho an'ny haino aman-jery iray dia afaka mampita ny metadata, takila-peo ary fampahalalana hafa hilazana anao raha io ny fampitam-baovao tianao na tsia. Ny toe-javatra manaraka dia mila manararaotra izay tianao atao, ny misy anao sy ny maro hafa.
Raha te hampiasa ny haino aman-jery ianao ary miaraka amin'ny haino aman-jery ny haino aman-jery, dia tsy maintsy ataonao amin'ny media ny haino aman-jery rehetra ary mandeha ianao. Na izany aza; raha eo amin'ny toerana iray ianao ary voatahiry ao anaty rahona ny haino aman-jery, na any amin'ny toerana faharoa, dia mila manaraka ny fitsipika mifehy ny orinasa ny MAM izay manohana izay ilainao hatao. Te-hamindra ny haino aman-jery eo an-toerana ve ianao? Te hahazo doka proxy ve ianao? Ianao ve mila ny haino aman-jery avo lenta rehetra na misy fisafidianana azy fotsiny? Ny valiny amin'ireo sy ireo fanontaniana hafa dia mamaritra ny voka-pifidianana MAM ho anao ao ambadik'ireo sehatra ireo. Primestream dia manana motera fitsipika namboarina hametraka fanamboarana ny rafitry ny configurable sy an-tsipiriany - ireo mpivarotra hafa hamaha ity olana ity amin'ny fomba samihafa.
Ny fifandraisan'ny rafitra MAM sy ny vahaolana fitehirizana dia mila mandinika ny hafainganana, ny toerana, ny lalana ary ny fahaizan'ny fitahirizana ny tenany, fa ny fifandraisana misy eo amin'ny fitahirizana sy ny misy azy io dia dinihina ihany koa fa mila mitantana ny rafitra MAM. Zava-dehibe ny hahatakaran'ny rafitra ny fampiasana sy ny satan'ny fampahalalam-baovao manerana ny orinasa, mba hahafahana mitantana ny habaka fitahirizana. Na manao ahoana na manao ahoana ny vidin'ny fitehirizana mora vidy na azo idirana dia tsy maintsy mitantana ny fampahalalam-baovao amin'ny fomba toy izany ny fisorohana ny duplikanina ary mihetsika ny haino aman-jery izay aiza ary rehefa mandahatra ny fizotrany, mifanohitra amin'ny fisian'ny korontana izay mety ho vokatry ny mpampiasa tsirairay na departemanta manapa-kevitra ny fomba fitantanana ny dingana.
Raha mijanona ny teknolojia roa ny MAM sy ny fitahirizana dia mifamatotra tsara izy ireo ary ny mpampiasa azy dia tsy mihevitra azy ireo ho misaraka ihany. Ny fitehirizana làlan-javaboary dia ny fanalan-javatra farany amin'ny fahafantarana hoe aiza ny fampahalalam-baovao misy anao, ary lavitra ny fantsom-pokon'ny fisie napetraky ny olona maro. Mbola mitady fanazavana ny olona roa amin'ny lafiny roa: na izy ireo mahalala ny toerana misy azy ary te-handeha mivantana any izy haka izay ilainy, na mitady azy ireo amin'ny fampiasana metadata izay tsapany fa hanome ny valiny marina.
Ny fomba voalohany nitarika ny olona hanangana firafitry ny folder izay mila manaraka tsara mba hitazomana ny filaminana, ny faharoa dia ny fanitarana ny vahaolana azon'ny MAM. Hitantsika izao ny rafitra MAM miaraka amina lahatahiry virtoaly ahafahan'ny mpampiasa manangona votoaty ary mametraka azy amin'ny toerana itiavany azy, fa ireo toerana ireo kosa dia tsy mampihetsika ny fampahalalam-baovao. Miaraka amin'ny dobo fitehirizana sy ny fanamboarana endrika be dia be, nesorina ny sakana maro vokatry ny sakana napetraky ny takelaka ara-batana izay namboarina teo amboniny. Satria manohy manome safidy bebe kokoa ny teknôlôjia, hanohy hanorina fahitana bebe kokoa isika amin'ny vahaolana izay manararaotra azy. Manohy hatrany izahay mahita fa ny mpanjifa dia mahita hatrany ny fanamby vaovao sy ny fidirana ary ny tombontsoa azontsika anampiana azy ireo hanandrana hahomby.
Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Spears & Arrows Storage TVU Networks	2019-08-06
Previous: Ny vokatra TSL dia manolotra fivoarana farany amin'ny sehatra vaovao fanaraha-maso SAM-Q Audio amin'ny IBC 2019
Next: Zixi: Manome am-pahombiazana ny fandefasana horonan-tsary mivantana amin'ny alàlan'ny IP